Waa maxay calamadaha caabuqyada (infectionada) jirka ku dhaca?
Author Topic: Waa maxay calamadaha caabuqyada (infectionada) jirka ku dhaca? (Read 10058 times)
« on: February 07, 2011, 02:57:45 PM »
Asc walal aad ayaad ugu mahadsantahay sida hagar la aanta ah ee aad isugu howleysid inad bulshadaada wax ugu qabato.walal waxan jeclaan lahaa inaan ogaado caabuqa jirka ku dhaco calaamadihiisa hadii uu dawo leeyahay . Mahadsanid
Re: Waa maxay calamadaha caabuqyada (infectionada) jirka ku dhaca?
« Reply #1 on: February 09, 2011, 01:23:50 PM »
Caabuqa ama infekshanka wuxuuna jirka kaga dhici karaa meel kasta, calamadaha ama astaamaha lagu gartane waxay la xiriirtaa xubinta uu saameeyay, haddii caabuq sanbab kugu dhaco waxaad yeelanaysaa: qufac, qandho iyo neefta oo ku dhibta. Hadduu caabuq caloosha ama mindhicirrada kaaga dhaco waxaad yeelanaysaa: Calool xanuun, shuban iyo matag.
Inkastoo la yiraahdo xumadda waxay astaan u tahay caabuq laakiin ma jirto calaamado u gooni ah caabuqa.
Views: 62323 May 22, 2009, 01:41:01 PM
Views: 64329 February 05, 2008, 07:56:57 AM
Views: 58559 September 01, 2009, 02:23:15 PM
Views: 42386 May 06, 2018, 01:17:25 PM
Views: 40800 January 22, 2019, 08:47:10 PM